Nhau - Iko pamusoro pevhavha yesimbi isina simbi zvakare ngura?
Iko pamusoro pevhavha yesimbi isina simbi zvakare ngura?
Chii chinonzi Stainless simbi? Mukunzwisisa kwevanhu vazhinji, "simbi isina chinhu" isimbi isingaregi ngura, asi vatengi vazhinji vanogadzira mavara engura kana mavara ebrown brown (mavara) achionekwa pamusoro pemavharuvhu esimbi. Ndechipi chikonzero? Stainless simbi mavharuvhu anokwanisa kurwisa emuchadenga oxidation-ndokuti, isina tsvina, asi zvakare anokwanisa kukora mune iyo svikiro ine acid, alkali, munyu-ndiko kuti, ngura kuramba. Nekudaro, saizi yaro yekurwisa-ngura kugona inoshanduka nemakemikari akaumbwa nesimbi yacho pachayo, nyika yekudyidzana, mamiriro ekushandisa uye mhando yepakati pezvakatipoteredza. Senge 304 simbi pombi, mune yakaoma uye yakachena mhepo, ine yakanyatsonaka anti-ngura kugona, asi kana yaendeswa kunzvimbo yegungwa, ichakurumidza kuita ngura mugungwa regungwa rine yakawanda munyu; uye 316 simbi pombi inoratidza zvakanaka. Naizvozvo, haisi chero simbi isina tsvina, iyo inopesana nekuora uye ngura mune chero nharaunda.
Iyo isina simbi vharuvhu yakavakirwa pane yakanyanyisa kuonda, yakasimba, gobvu uye yakagadzika chromium-rich oxide firimu (firimu rekudzivirira) rakaumbwa pamusoro payo kudzivirira kupinda uye oxidation yema oxygen maatomu kubva mukuenderera mberi nekuwana kugona kurwisa ngura. Kamwe nekuda kwechimwe chikonzero, iyi firimu inoramba ichiparadzwa, maatomu eoksijeni mumhepo kana mvura inoenderera ichipinda kana maatomu esimbi ari musimbi acharamba achiparadzaniswa, achiumba yakasununguka iron oxide, uye iyo simbi yepamusoro icharamba ichipiswa. Kune akawanda mafomu ekukuvadza kune ino yepamusoro firimu,
Kune akati wandei mhando dzesimbi simbi mavhavha ayo akajairika muhupenyu hwezuva nezuva:
1. Iko pamusoro pevhavha yesimbi isina simbi inounganidza guruva kana zvimwe zvimedu zvesimbi zvine zvimwe zvinhu zvesimbi. Mumhepo ine hunyoro, iyo condensate pakati pechisungo nesimbi isina simbi inobatanidza iyo mbiri kuita bhatiri diki, iyo inotangisa electrochemistry Reaction, iyo firimu inodzivirira yakanganisika, inonzi electrochemical corrosion.
2. Organic matter muto (senge mavise nemuriwo, sosi yenyuchi, sputum, nezvimwewo) zvinonamira pamusoro pevhavha yesimbi isina simbi. Muhupo hwemvura neoksijeni, inogadzira organic acid, uye iyo organic acid ichatora simbi pamusoro kwenguva yakareba.
3. Kumusoro kwevhavha yesimbi isina simbi ine acid, alkali uye zvinhu zvemunyu (senge mvura yealkali uye mvura yematombo ichimwaya pamushongedzo wemadziro), zvichikonzera kuora kwenzvimbo.
4. Mumhepo yakasviba (senge mhepo ine huwandu hwakawanda hwesulfide, kabhoni oxides, uye nitrogen oxides), mvura yakaumbirwa ichaumba sulfuric acid, nitric acid, uye acetic acid emvura mavara, zvichikonzera kukora kwemakemikari. Aya mamiriro ari pamusoro anogona kukonzera kukuvara kwesimbi isina simbi yekudzivirira firimu uye kukonzera ngura.
Naizvozvo, kuitira kuti uve nechokwadi chekuti pamusoro pesimbi panopenya nekusingaperi uye haina ngura, tinokurudzira:
1. Iko pamusoro peyekushongedza simbi isina simbi vharuvhu inofanira kucheneswa nekukweshwa kazhinji kubvisa zvinonamirwa uye kubvisa zvekunze zvinhu zvinokonzeresa.
2. Iyo vharuvhu 316 yesimbi isina chinhu inofanira kushandiswa munzvimbo yegungwa. Iyo 316 zvinhu inogona kudzivisa ngura yemvura yegungwa.
3. Makemikari anoumbwa nedzimwe pombi dzesimbi dzesimbi pamusika haakwanise kusangana nematanho anoenderana enyika, uye haakwanise kuzadzikisa zvinodiwa nezvinhu makumi matatu nemana. Naizvozvo, zvinokonzeresa ngura, iyo inoda kuti vashandisi vasarudze zvine hungwaru zvigadzirwa kubva kune vanogadzira zvigadzirwa. Kuvaka uye kuvaka nzvimbo dzekutarisisa Kuti tidzivirire kukwenya uye kunamatira kwezvinhu zvinosvibisa panguva yekuvaka, mavhavha esimbi esimbi anovakwa mudunhu remufirimu. Nekudaro, nekuwedzerwa kwenguva, iyo yakasara yemhinduro yekunamatira inoenderana nenguva yekushandisa kweiyo firimu. Mushure mekubvisa iyo firimu mushure mekuvaka, iyo yepamusoro inofanirwa kusuka, uye maturusi esimbi esimbi anofanirwa kushandiswa. Kana uchichenesa zvakajairika maturusi neyakajairwa simbi, inofanirwa kucheneswa kuitira kudzivirira kunamatira kwesimbi mafirita. . Kuchenjera kunofanirwa kutorwa kusabvumidza iyo inoparadza magineti uye dombo remhando yepamusoro yekuchenesa mishonga kuti ubate iyo isina simbi pamusoro. Kana vari kusangana, vanofanirwa kushambidzwa nekukasira. Mushure mekuvaka kwapera, shandisa kwazvakarerekera sipo uye mvura kushambidza simende, kubhururuka madota, nezvimwe zvakasungirirwa pamusoro.
Mukupfupisa, mavhavha esimbi esimbi haachazove ngura zvachose, uye acharamba achiita ngura pasi pemamwe mamiriro. Tinofanira kuisa, kuchengetedza, nekugadzirisa mavhavha esimbi asingaite zvakanyatsoenderana nezvinodiwa, uye edza kudzora ngura chiitiko chemasvini esimbi isina waya pasi pemamwe mamiriro.
Post nguva: Chivabvu-02-2020